brand ဝတ်တာထက် ကိုယ်တိုင်brand ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ ကစ်ကစ် – Media9
ဆယ်လီ ဗွီဒီယို အနုပညာ အမေးအဖြေ
brand ဝတ်တာထက် ကိုယ်တိုင်brand ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ ကစ်ကစ်
October 5, 2019 media9Comment(0)
ဝါကျွတ်ရင် အိမ်ထောင်ပြုမလား မေးတာ တနှစ်တခေါက်အမေးခံနေရတယ် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဘာဖြေရမလဲ ဖြေစရာလဲမရှိဘူး ….
ဝါက်ြတ္ရင္ အိမ္ေထာင္ျပဳမလား ေမးတာ တႏွစ္တေခါက္အေမးခံေနရတယ္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ ဘာေျဖရမလဲ ေျဖစရာလဲမရိွဘူး ….
ဆယ်လီ အနုပညာ အမေးအဖြေ
သုံးယောက်စုပြီးခရီးသ ွားဖို့လုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်
April 3, 2019 media9
[Zawgyi] သၾကၤန္အစီအစဥ္နဲ ့ဆက္လုပ္ျဖစ္မယ့္အနုပညာလုပ္ငန္းေတ ြအ ေၾကာင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေျပာလိုက္တဲ့ ေမျမင့္မိုရ္ အိေခ်ာပို နဲ ့အကယ္ဒမီယ ြန္းယ ြန္း [Unicode] သြင်္ကန်အစီအစဉ်နဲ့ဆက်လုပ်ဖြစ်မယ့်အနုပညာလုပ်ငန်းတေ ွအ ကြောင်း ပျော်ပျော်ပါးပါး ပြောလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ် အိချောပို နဲ့အကယ်ဒမီယ ွန်းယ ွန်း Media9
ဆယ်လီ ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင် အနုပညာ
သရဲခြောက်ရင် ကြောက်ဖို့ထက် အမျှဝေပါ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ “မခိုင်ကြီး”
July 18, 2019 July 18, 2019 media9
[Unicode] အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်က လက်ရှိမှာ ရုံတင်တော့မယ့် ကြိမ်နှုန်း ၊ သူစိမ်းအိမ် အစရှိတဲ့ Horror ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်ထားပြီး သရဲကားရိုက်တဲ့ခံစားမှု ၊ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ [Zawgyi] အဆိုေတာ္ သရုပ္ေဆာင္ ထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္က လက္ရွိမွာ ရံုတင္ေတာ့မယ့္ ၾကိမ္ႏႈန္း ၊ သူစိမ္းအိမ္ အစရွိတဲ့ Horror ဇာတ္ကားေတြမွာ ပါ၀င္ထားျပီး သရဲကားရိုက္တဲ့ခံစားမႈ ၊ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္ ။
သူထူးစံရဲ့ မငျ်ဂလာပှဲအတှကျ အားကြိုးမာနျတကျ ကူညီပေးနတေဲ့ နမေငျး
February 15, 2019 February 15, 2019 media9
[Unicode] နေမင်းက အကိုလို ခင်ရတဲ့ သူထူးစံရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအတွက် အားကျိုးမာန်တက်ပါဝင်ကူညီနေတာပါ။ ကိုယ်တိုုင်ကိုယ်ကျ ဖိတ်စာတွေ လိုက်ဝေပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ Photo : နေမင်း သရုပ်ဆောင် နေမင်းက အကိုလိုခင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်သူထူးစံရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအတွက် လိုအပ်တာတွေ မှန်သလို လိုက်လံ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူထူးစံရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာတွေကို သူထူးစံကိုယ်စား အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အိမ်ကို ပို့ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ “ကျွန်တော့်၏ချစ်စွာသောအကို “ သူထူးစံ ” ၏ မင်္ဂလာဆောင်ကို တက်ရောက်ဖို့အတွက် ဖိတ်ကြားပေးရန် ကျွန်တော်တာဝန်ယူ၍ ဖိတ်ကြားပေးရမည့် အနုပညာခရီးသွားအနုပညာနှလုံးသားများမှာအောက်ပါ အနု ပညာရှင်မျာ ပါကွယ် လာရောက်ပေးပို့နိုင်ရန် အကိုအမညီညီမများ ၏ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လိပ်စာလေးများအားပေးပို့ပေးကြခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြပါလားဟင် မက်ဆေ့ကနေပြီးဖြင့်ဖြင့်ပေါ့” ဆိုပြီး သူ့ရ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ( ၁၄) […]
ပြေတီဦးက သိပ်ငယ်ချင်တဲ့ရောဂါရှိတယ်လို့ပြောလာတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်